IFaux Pas yeMfashini Esheshayo - Isikhungo se-EcoTechnology
I-Faux Pas Yemfashini Esheshayo
Imfashini esheshayo: udwi osangene kusuka ekukhiqizeni kuya esitolo
Eminyakeni engamashumi amabili edlule, ukukhiqizwa kwezingubo zomhlaba wonke yaqina futhi yaphindeka kabili, ivuselela isimo se "fashion esheshayo". Lo mqondo ubhekise kumodeli yebhizinisi eyavela njenge ukukhiqizwa kwezindwangu kwasebenza kangcono, ukwandisa inani nokuhluka kwezingubo.
Imfashini esheshayo ithembela kumathrendi ashintsha njalo, ukusetshenziswa okuphindayo, nezinto ezinamanani aphansi. Namuhla, umthengi angathenga imikhiqizo emisha cishe njalo ngeviki, ngoba abathengisi bahlala beletha imiklamo emisha nemikhiqizo ukuze ihambisane nezimo ezihlala ziguquka. Lokhu kugcina abathengi babuyele okuningi futhi bathenga kaningi unyaka wonke.
Ngenxa yezidingo zabathengi, abenzi baphoqeleka ukuthi bagcine amanani abo ephansi ngenkathi benyusa inani lamaqoqo ahlinzekwa ngonyaka. Lokhu, noma kunjalo, akusho ukuthi ikhwalithi nayo inyukile ngobuningi. Ukwehla kwekhwalithi yezingubo kusho ukuthi izingubo azihlali isikhathi eside futhi zidinga ukushintshwa kaningi. Izindleko eziphansi zakha nomqondo wokuthenga izingubo eziningi nokulahla izinto ngemuva kokugqokwa izikhathi ezimbalwa kuphela. Izimpahla eziningi ezikhiqizwayo zisho, ekugcineni, kuzoba nokuchitheka okuningi kwezingubo.
Ukusingathwa kwendwangu: intengo yemfashini esheshayo
Ngo-2017, i-EPA ilinganisela ukuthi kwakukhona cishe Amathani ayizigidi ezingama-16.9 kadoti wendwangu owenziwe e-US, futhi lokho, kuphela u-15.2% kuphela owabuye wasetshenziswa kabusha. Lokho kuhumusha cishe amathani ayizigidi eziyi-14.3 wezindwangu agcina esekulahlweni lokulahlwa komhlaba noma aqedwe ukusebenzisa amandla, futhi kunikelwa ngamathani ayizigidi ezi-2.6 kuphela. Emhlabeni wonke, zikhona cishe amathani ayizigidi ezingama-92 kadoti wendwangu kukhiqizwa unyaka ngamunye.
Izindwangu nazo ziyafaka isandla U-8-10% we-CO2 ukukhishwa emhlabeni jikelele. Ukusetshenziswa kwamandla okukhiqiza izindwangu nokuthumela imikhiqizo yokugcina kubaluleke kakhulu kusukela embonini yendwangu kuncike kakhulu emafutheni ezimbiwa phansi. Ngenhlanhla, izinkampani eziningi ngokwengeziwe ziya kude nokuncika kukaphethiloli futhi zibheka ezinye izindlela ezizinzile zokwenza izindwangu.
Yize kunezinkinga eziningi eziphathelene nokukhiqizwa kwezingubo nezinto zokwakha, kukhona nezinkinga phakathi nesikhathi “sokusetshenziswa” sempilo yento. Cishe Izingubo ezingama-60% ezikhiqizwe emhlabeni wonke kwenziwa ngezinto zokwenziwa. Lapho izingubo ezinezintambo zokwenziwa ziwashwa, amapulasitiki akulezi zinto ahlukane futhi adedelwe angene emifuleni yamanzi, afake isandla cishe ama-35% we-microplastics ezitholakala olwandle.
Izixazululo: phuma nokusha, ungene nokusetshenzisiwe!
Enye yezindlela ezilula kakhulu zokusuka kumfashini osheshayo, ngenkathi usathola amadili amahle, ukuthenga izingubo ezingamasekeni! Le yindlela enhle yokusebenzisa isikhathi esithile uvuselela ikhabethe lakho ngezindleko eziphansi zombili isikhwama sakho semvelo kanye nemvelo. Ukuthenga into esetshenzisiwe kunganciphisa i- uphawu lwekhabhoni ngo-82%. Ukuthengwa kwezimpahla ezingamasekeni nakho kusho ukuthi kuncane izinsizakusebenza ezisetshenzisiwe nokusaphazwa, kuncipha ukungcola, futhi kunezinto ezimbalwa zokugqoka ezigcina zigcwaliswa ezindaweni zokulahla udoti. Ngenkathi ukukhohlisa kungathatha isikhathi eside ukuhluza yonke imikhiqizo enikelwayo, kungokuhlangenwe nakho okuzuzisa kakhulu lapho uthola lokho kweba okumangazayo!
Izinhlelo zokusebenza / Izinketho eziku-inthanethi
Uma ukhetha ukuthenga izingubo online, kukhona ezinye izindlela ezinhle ongazisebenzisa! Ukuthenga online kungasho nokuthi a isizinda sonyawo lwaphansi sekhabhoniivula ifayela le-PDF uma kuqhathaniswa nokuthenga esitolo sezitini nodaka. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi ukuthenga okungajwayelekile, nokuthenga izinto ezingaphezu kweyodwa ngasikhathi sinye, ukuthi ukuthenga nge-inthanethi kungaba kanjani "okwe-eco-friendly". Ukuthenga into eyodwa, njalo ngeviki, ku-inthanethi, kungaba nomthelela ekunyathelisweni kwekhabhoni ephezulu. Kukhona inqwaba yezinhlelo zokusebenza / izinketho eziku-inthanethi laphaya, ngayinye enobuhle bayo, engaba ngumhlahlandlela wakho ekunikeleni noma ekubekeni imali nge-inthanethi.
I-ThredUp: Kule ndawo yemakethe ethengisa kabusha, ungathengisa izinto zakho noma uthenge amasekeni. Isebenziseka kalula, inikela ngezihlungi eziningi ukwenza kube lula ukuhlunga izinkulungwane zezinto zazo! Uma uthenga, iThredUp ithengisa izingubo, izicathulo nezinye izinsimbi. Uma unikela, bamukela yonke imikhiqizo yezingubo zabesifazane nezingane, inqobo nje uma into inethegi yosayizi. Banikela ngezikhwama "ezihlanjiwe" ukuze upakishe izingubo zakho osuzenzile noma ongazidingi bese uzithumela kubo. Unenketho yokuthengisa izinto zakho noma ukunikele ngazo, futhi benza intengo, bayathengisa, futhi bathumele kumthengi olandelayo. I-ThredUp iphinde inikeze ezinye izinsizakalo ezihlukile, njenge “Amabhokisi weGoody"Futhi"Izinsimbi".
Buhle: kusebenziseka kalula, amanani entengo ashibhile wokuthumela, amakhodi ephromo, ukuthengisa unyaka wonke, kanye nenketho ye-Buy & Bundle yokuthumela. Lokhu kuvumela abathengi ukuthi bapakishe izinto kusuka kuma-oda amaningi ukuze bathumele ndawonye, ​​umane ukhokhe isilinganiso sokuthumela kanye, futhi ungaqhubeka nokuthenga izinsuku eziyi-7, unezela kule nqwaba. Kukugcinela imali futhi kunciphisa udoti owengeziwe ekupakisheni!
Izindleko: izinkokhelo zivame ukuba phansi lapho uthengisa izingubo, kuzodingeka ukhokhe imali yokubuyisela uma ungathandi into oyi-ode, abayemukeli impahla yabesilisa.
Poshmark: Enye ipulatifomu enhle lapho une "closet" yakho yokuthengisa izinto zakho kusuka kuyo. Ungathengisa cishe noma yini; okokugqoka, izicathulo, izesekeli, izimonyo, ngisho nezinto zasekhaya. Uma uthengisa, kufanele ulayishe izithombe zakho, wenze intengo yezinto zakho, bese uthumela iphakethe kumthengi. Uma uthenga, ungasesha futhi usebenzise izihlungi ukukusiza ukuthi uhlele kangcono ngezinkulungwane zezinto ezifakwe kuhlu abanye abasebenzisi. Lapho usuthole into oyithandayo, unganikela noma wamukele inani njengoba linjalo, ukhokhele ukuthunyelwa, kuthi ezinsukwini ezimbalwa uthole into yakho entsha!
Buhle: usetha amanani akho lapho uthengisa, iPoshmark ikunikeza ilebula lokuthumela ukuze uthumele izingubo zakho kumthengi, njengomthengi ungaphakamisa ukunikezwa kwe-athikili yezingubo, ukukhethwa okukhulu kwemfashini ephezulu, ukuvikelwa komthengi.
Ububi: ukuthunyelwa kungabiza (ikakhulukazi uma uthenga kubantu abahlukene aba-2), uma ukuthengisa izingubo ngentengo ephansi inkokhelo yakho iphansi, kuyaqabukela kunanoma yimaphi amakhodi ephromo anikezwayo.
I-Facebook Marketplace ne-eBay: Lezi futhi yizindlela ezinhle zokuthengisa izingubo zakho online. Lezi zimakethe eziku-inthanethi zikuvumela, njengomthengisi, ukuthi ubhale imikhiqizo ehlukahlukene futhi usethe intengo yakho. Lapho uthengisa ku-eBay, unenketho yokwamukela amabhidi entweni, noma ukuyithengisa ngentengo emisiwe. Ukuthenga ku-Facebook Marketplace, ungathenga izinto endaweni yangakini uphinde uzithathe, noma uthenge emabhizinisini bese lezi zinto zithunyelwa kuwe. Lapho uthenga ku-eBay, izinto zithunyelwa kuwe, futhi kunezinketho ezimbili: bhida entweni noma uthenge into ngentengo yayo emisiwe.
Thola Isitolo Sokubuyisa: Abathengisi abathile, njenge I-Patagonia or Madewell, Futhi banikela ngezinhlelo zabo zokubuyisela emuva ekuphakamiseni noma ukulungisa izingubo. Abathengisi baqoqa imikhiqizo esetshenzisiwe ngalezi zinhlelo ukuyiphindisela emuva kumjikelezo wabo wokukhiqiza. Njengesikhuthazo, lapho uletha into ozoyisebenzisa kabusha, abathengisi ngokuvamile banikela ngesaphulelo ekuthengeni kwakho okulandelayo. Isibonelo, ukunikezwa kukaLevi Isaphulelo sika-20% entweni eyodwa lapho uvuselela kabusha ama-denim kwesinye sezitolo zabo.
Khumbula: nciphisa ukusetshenziswa kwakho kwezingubo kuqala, bese uthenga okuthe xaxa! Lapho ufuna ukulahla izingubo, nikela noma zama ukulungisa okungalungiswa. Abanye abantu bamane bakhetha ukuthenga izingubo ezintsha futhi bathande umqondo wokuthenga ezintsha. Esikhundleni sokucabanga ukuthi uthenga okuthile “okusetshenzisiwe”, cabanga njengokuthenga okuthile okusha kuwe.
Kunezinye izinketho eziningi laphaya! Sabalalisa izwi kubangani bakho nasemndenini wakho (iningi lalezi zingxenyekazi linikeza ibhonasi yokudlulisela futhi) futhi usize abanye ukuthi bagibele umkhuba wokuthokozisa.
Thatha ukuthunga! Lesi yisikhathi esimnandi, esenzelwe isikhathi esedlule futhi sikuvumela ukuthi uguqule izingubo zakho zilingane nesitayela sakho. Ukuthenga indwangu nokwenza izingubo ekuqaleni kungabiza, kepha ungakhuphula izingubo ezifuthwayo futhi uzishintshe ngokuthanda kwakho. Lawa makghono kuhle ukuwafunda ngoba ungalungisa noma yiziphi izimbobo noma ukukhubazeka ngaphambi kokunikela, noma ungakugcina njengengubo egqokekayo!
Phindisela izingubo ezindala zibe yizidwedwe ezigezekayo. Le kuyindlela enhle yokunciphisa ukusetshenziswa kwempahla yokuhlanza, njengamathawula wephepha, ngenkathi kugcinwa izindwangu endaweni yokulahla udoti.
Uma unendlela yokwenza thenga okusha: cabanga izindleko ngokugqokwa ngakunye - imali ibiza malini ihlukaniswe inani lezikhathi oyigqoka ngaso. Lapho ugqoka kakhulu into, kuzoba imali engcono kakhulu.
Ungahle ubheke inani lentengo ku-athikili yengubo bese ucabanga ukuthi "ayikho indlela engizosebenzisa ngayo u- $ 100 kule juzi". Kodwa-ke, cabanga ngekhwalithi yezinto ezibonakalayo / iziqu, yini indwangu yenziwe, nokuthi umkhiqizo wenziwa kuphi. Imvamisa kufanelekile ukutshalwa kwemali uma kukhona okwenziwe ngokotini osimeme ongu-100%, owenziwe e-US, uzizwa / ubukeka usezingeni eliphakeme, futhi uyinto oyithandayo nogqoka kaningi!
Ukusekela “imfashini ehamba kancane”Imikhiqizo. Umqondo wemfashini ehamba kancane ukukhiqiza izingubo ezisezingeni eliphakeme ezenziwe ngezinto ezitholakala ngokuqinile. Lezi zinkampani zivame ukusebenza endaweni futhi zenze izingubo ezihlala isikhathi eside, ngenkathi zibheka nomthelela wazo emhlabeni nakubantu.
UMnyango Wezokuvikelwa Kwezemvelo eMassachusetts inikeza insiza enhle yokulahlwa kwendwangu nokubuyiselwa. Bheka i-Beyond the Bin Recycling Directory ukuthola ukuthi unganikela kuphi ngezinto zendwangu (eMassachusetts kuphela).
Phinda usebenzise i-Smart eMassachusetts kuyisisetshenziswa esikhulisa ukuqwashisa ngendlela yokusebenzisa kabusha kahle. Sesha into ethile ku- “Recyclopedia” yabo ukuze ubone ukuthi ingangena yini emgqonyeni wokusebenzisa kabusha, noma uma ikhona enye indlela yokulahla leyo nto.
By Ozette Ostrow|2020-10-02T11:25:11-04:00Septhemba 17th, 2020|kabusho imikhiqizo esisebenzile, Ukusimama, Ukudonswa Kwezimfucuza|